Horudhac: Chelsea vs Aston Villa… (Blues oo doonaysa inay soo gabagabayso saddex kulan oo aysan guul gaarin) – Gool FM
(London) 04 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa wajahaysa Aston Villa kulan ka tirsan horyaalka Premier League caawa iyadoo Blues ay eegeyso inay soo gabagabayso saddex kulan oo ay guul gaari la’dahay tartammada oo dhan.
Dhinaca kale Aston Villa ayaa u safreysa garoonka Stamford Bridge iyadoo loo diiwaan geliyey inay afar dhibcood ka heshay labadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la kala ciyaartay Newcastle United iyo Manchester United.
Gooldhaliyaha ugu sarreeya Chelsea ee Tammy Abraham ayaa weli dareemaya xanuun dhanka misigta ah, waxaana shaki laga galinayaa kulanka caawa ay wajahayaan Villa, kaasoo amaan aad u fiican qaatay xilli ciyaareedkii hore.
Ross Barkley ayaa xaqiiqdii ciyaartan ku seegi doona xanuun awgiis.
Daafaca garabka midig ee Aston Villa, Frederic Guilbert ayaa hal kulan ganaax ku seegaya kaddib markii uu uruursaday shan kaar oo kuwa digniinta ah.
Anwar El Ghazi ayaa jilibka ka dhaawacmay waxaana laga saaray kulankii ay la dheeleen Manchester United, laakiin Jota ayaa ku lug yeelan doona kulankan tan iyo markii uu maray qalliin sheelada ah.
>- Chelsea ayaa guuleysatay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League garoonkeeda kula ciyaartay kooxda Aston Villa, waxaana cel-celis ahaan ay kulammadaas ka dhalisay 15-1. Weligood ma guuleysan shan kulan oo xiriir ah kulammada horyaalka iyagoo kula ciyaaraya kooxdan garoonkooda Stamford Bridge.
>- Aston Villa ayaa guuldarro la kulantay siddeed ka mid ah sagaalkii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaareen Chelsea, marka laga reebo 1-0 ay ku badiyeen bishii Maarso 2014-kii.
>- Kooxda Aston Villa ayaa khasaaro la kulantay siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay Premier League ku ciyaartay London, waxaana laga dhaliyey ugu yaraan labo gool todobo ka mid ah kulammadaas.
>- Jack Grealish oo ka tirsan Aston Villa ayaa gacan ka geystay lix gool todobadiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ka soo muuqday horyaalka Premier League waxa uu dhaliyey 3 gool isagoo caawiyery 3 gool oo kale, waa mid ka mid ah kaliya saddex ciyaaryahan oo Ingiriis ah kuwaasoo gool dhaliyey isla markaana caawiyey ugu yaraan saddex gool kulamada horyaalka sare xilli ciyaareedkan, labada kale waa Jamie Vardy iyo Marcus Rashford.
Manchester City oo guul muhiim ah ka soo gaartay kooxda Burnley oo ay booqatay…+SAWIRRO